Olee otú ndị na-abụghị egwuregwu cha cha nwere ike irite uru site na ịrụ ọrụ na ndị na-egwu egwuregwu | Martech Zone
Ndị na-egwu egwuregwu na-esi ike ileghara anya, ọbụlagodi maka ụdị egwuregwu na-abụghị nke egwuregwu. Nke ahụ nwere ike ịdị ịtụnanya, yabụ ka anyị kọwaa ihe kpatara ya.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ tara ahụhụ n'ihi Covid, mana egwuregwu vidio gbawara. Ya na atụmatụ ya karịrị $ 200 ijeri na 2023, uto nke ihe e mere atụmatụ kwadoro 2.9 ijeri gamers n'ụwa nile na 2021.
Akụkọ Global Market Market
Ọ bụghị naanị na ọnụ ọgụgụ ndị na-atọ ụtọ maka ụdị egwuregwu na-abụghị nke egwuregwu, mana usoro okike dị iche iche na egwuregwu. Di iche iche na -emepụta ohere iji chee ụdị gị n'ụzọ dị iche iche wee rute ndị na-ege gị ntị na mbụ itinye aka. Egwuregwu vidio dị ndụ dị ka otu n'ime ọrụ nrọ ụmụaka, yana ahịa ahịa a na-atụ anya ya iru nde 920.3 ndị mmadụ na 2024. Nrịgo nke mbubata ụgbọ ala dịkwa mkpa; a na-atụ anya iru 577.2 nde mmadụ site na otu afọ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% nke uru mgbasa ozi na-ebugharị site na ụdị ndị na-abụghị nke egwuregwu, ahia ndị na-egwu egwuregwu bụ-apụghị izere ezere. Ihe mbu mbu bu ihe di nkpa iji muta ma ghota ahia ahia n'ihu ndi gi. Mana nke mbu, ikwesiri ighota nke oma ihe egwuregwu di ka na 2021.
A kọwara ndị na-ege Egwuregwu
I nwere ike iche na ọ bụ ụmụaka ndị na-eto eto na-eji oge ha na-enweghị ego a na-akparaghị ókè — ma nke a agaghị abụ eziokwu. 83% nke ụmụ nwanyị na 88% nke ụmụ nwoke nwere ike nkewa dị ka ndị egwuregwu. Ọ bụ ezie na ọ bụ egwuregwu kacha ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto, 71% nke ndị gbara afọ 55-64 na-egwukwa egwu. A bịa na ọnọdụ, egwuregwu bụ ihe zuru ụwa ọnụ. 45% nke ndị Denmark na -ekwu na ha na -egwu egwuregwu vs. 82% nke Thais, mana nnukwu akụ na ụba ụwa na -agbanwe agbanwe inwe njikọ siri ike, nke dị oke mkpa maka ndị na-ere ahịa. Egwuregwu na mmasị dị iche iche na-adị iche na nkebi ndụ, agbụrụ, na agụụ mmekọahụ.
Na ọkwa a dị iche iche n'ịgba egwu, o doro anya na ọdịnala ọdịnala anaghị ejide. Ma olee otu nke a si abara gị uru egwuregwu na-abụghị nke egwuregwu? Ọ pụtara na ị ga-achọta ndị na-egwu egwuregwu nke bụ ihe dabara adaba maka gị.
Uru Uru Ndị Na-egwu Egwuregwu Ga-Egwuregwu Ndị Na-abụghị Egwuregwu
Ndị na-eme egwuregwu na-ahụkarị ụlọ ọrụ na-emetụta ọdịmma ụlọ ọrụ na - nke ukwuu. Ndị na-ege ha ntị na-anwụ anwụ, ha na-arụsi ọrụ ike ma nwee ụdị egwuregwu niile. Egwuregwu bụ dijitalụ; gamers na-arụsi ọrụ ike, ọkaibe mgbasa ozi ndị ahịa. Usoro mkpọsa nke rụụrụ gị ọrụ ọdịnala nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ebe a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịgbanyeghị ha. Ọ bụ mkparịta ụka nke Twitch ma ọ bụ YouTube, ọ bụghị TV ma ọ bụ mgbasa ozi. Mgbasa ozi na egwuregwu ga-eme ka ọdịmma ọdịnala ma ọ bụ na ị ga-ekewa ndị na-ege gị ntị, ndị na - eme ihe ike bụ ụzọ zuru oke iji kwalite akara gị na njedebe.
Kedu ihe ịmekọrịta na ndị na-eme egwuregwu na-enye gị ohere ịbanye? Ndị na-ege ntị dị iche iche nke anaghị enwe ike ịchọta ebe ọzọ-ọkachasị na otu ọkwa. Mmiri iyi na-abụkarị ọtụtụ awa, yana njirimara nkata ya na-eme ka nkwukọrịta oge niile dị n'etiti ndị na-ege ntị na ndị na-ege ntị. YouTube egwu kụrụ 100 ijeri oge elekere na 2020, ọnụọgụ nke enweghị ọgụgụ isi. Ma, ọ bụghị ihe niile banyere size.
Ọ bụ izi ezi nke ndị na-eme egwuregwu na-emetụta ndị na-ege ha ntị, na -emepụta mmekọrịta siri ike. Na Septemba 2020, ụlọ ọrụ na-egwu egwuregwu hụrụ Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke njikọ aka nke 9% site na nano influencers (1,000-10,000). Ndị na-eme ihe nkiri Mega (1 nde ma ọ bụ karịa ndị na-eso ụzọ) nwere ọkwa nke abụọ kachasị elu na 5.24%, na-atụ aro ka ndị egwuregwu egwuregwu kachasị egwu na-enwe ike ịnye ndị na-ege ha ntị ntị oge niile. Egwuregwu na-egwu egwu na-adị ndị mmadụ ezigbo mma, a na-echekwa ngwaọrụ ndị dị ka Twitch chat iji mee ka nke ahụ bawanye.
Olee ụdị gị nwere ike isi rụkọta ọrụ na ndị na-eme egwuregwu
E nwere ụzọ dị iche iche esi emekọrịta ihe na ndị na-egwu egwuregwu ịgba egwu. N'okpuru ebe a bụ ụzọ ndị bụ isi anyị na-akwado ndị na-abụghị egwu egwuregwu.
Mmekọrịta a na - akwado - Akara ekwuru bụ ezigbo mkpuchi nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nke etinyere n'ime ọdịnaya onye na-emetụta ihe. Cloutboost mere mkpọsa maka Hotspot Shield VPN iji nwekwuo mmata nke ọma ma na-ebudata nbudata ngwaahịa, na-akwado Twitch influencers. Nkwado nke Twitch a bu ikwuputa nsogbu nke onwe ha meghariri, yana ikwurita banyere uru nke ihe a. Nkwado ahụ gosipụtara onyinye, ntinye nke Hotspot Shield na ọkwa ọkọlọtọ na akara ngosi, ma jiri oku chatbot na-eme kwa oge.
Onye mgba asọmpi VPN, NordVPN, na-elekwasị anya na azụmaahịa mmetụta-ọkachasị na YouTube. Ga-ahụ akara ha gafee usoro ịgba egwu egwuregwu niile, site na obere ndị na-egwu egwuregwu na PewDiePie. NordVPN na-emesi ya ike ogologo oge uru nke YouTube; ndị na-ege ntị ga-ekiri vidiyo site na ọnwa ma ọ bụ afọ tupu oge algorithm na njirimara onye ọrụ adịghị elekwasị anya na nbudata ọhụrụ. N'iji ya tụnyere, nyiwe dịka Twitch na Instagram na-elekwasị anya na ọdịnaya dị ugbu a.
LG na-egosi ihe atụ ọzọ nke ndị na-egwu egwuregwu na-abụghị egwu egwuregwu. Companylọ ọrụ ahụ nwere akụkọ ihe mere eme nke iso ndị gaminggba Cha Cha na-egwu egwuregwu rụọ ọrụ, na-egosipụta etu LG TV nwere ike isi bụrụ nhọrọ dị mma maka ndị egwuregwu. Games Daz ike ihe LG na-akwado vidiyo nke ahụ na-eweta ngwaahịa ahụ n'ụzọ nkịtị, na-enye nnukwu ihe atụ nke otu ụdị egwuregwu na-abụghị nke ịgba egwu nwere ike isi wepụ ezigbo njikọta ma rute ndị ọhụụ.
Nye onyinye - Inye ego na-abụkarị ụzọ dị mma iji mepụta njikọ aka na akara gị. KFC gbara mmekọrịta mmekọrịta egwuregwu na Twitch iyi iji nye ndị na-ege ntị onyinye maka ngwa ahia na kaadị onyinye mgbe ha meriri egwuregwu. Ndị ọrụ banyere site na iji kọmputa ede KFC emote (Emoticons ndị metụtara Twitch) na nkata Twitch, na onyinye a haziri dika egwuregwu a na-egwu. Inwe akara gị maka ngwaahịa ahaziri maka egwuregwu ahụ bụ nnukwu ụzọ iji jikọta ya.
Ihe omume egwuregwu - Hershey leveraged one of gaminggba Cha Cha kasị ukwuu kwa afọ ihe, TwitchCon 2018, ka na-akwalite mmanya mmanya Reese ọhụrụ ha. Ebe ọ bụ na TwitchCon wetara nnukwu iyi iyi ikpo okwu ọnụ n'otu ụlọ, Hershey na-akwado Ninja na DrLupo maka ndụ iyi ọnụ. Ihe mmeghe a nwere ohere pụrụ iche nke ịnwe ohere ịnweta iyi na ọnụ na mmadụ, yana mmekorita na-egwu na echiche nke Ninja na DrLupo bụ ndị ịtụnanya dị ka Hershey na Reese.
Ọ bụrụ n’ịlele akara gị anya-ewepụpụrụ n’egwuregwu, lee anya karịa MAC ịchọ mma maka mmụọ nsọ. MAC kwadoro TwitchCon na 2019, Na-agba ọsọ giveaways, àjà ntecha ngwa ọrụ, na ew ọma nwanyi iyi dị ka Pokimane igwu egwuregwu na ụlọ ntu ha. MAC SVP Philippe Pinatel kwusiri ike otú Twitch si agba ume na mmadụ igosipụta onwe ya na obodo ya, atụmatụ ndị na-akọwa MAC dị ka ika.
Esports - Esports bụ otu mpaghara egwuregwu egwuregwu na-egwu egwu nke ụdị nwere ike itinye aka na ya. Aldi na Lidl sooro ndị otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka egwuregwu na-emekọrịta ihe iji kwado jersi ma mepụta ọdịnaya site na nkwalite njikọta. Aldi na Vitality gbakọtara iji kwalite izipu ozi nke isi nke Aldi n'ihe dị mkpa banyere nri siri ike, na-eke ya na Vitality na-adịgide adịgide maka arụmọrụ.
Izute na Ekele - Dị ka egwuregwu egwuregwu, zukọta ma kelee gị na-enye ụzọ iji mee ka ndị na-eme ihe ike igwu egwuregwu na mpụga nke ụwa dijitalụ. Dịka ọmụmaatụ, lelee Nzukọ Shroud ma kelee ya na Zumiez. Mmekọrịta nke mmadụ na ndị na-eme egwuregwu na-emepụta egwuregwu na-emepụta nnukwu uru ma na-eme ka ndị obodo raara onwe ha nye ọnụ.
Iru nke Gaminggba Cha Cha
Industrylọ ọrụ na-egwu egwuregwu abụghịzi otu obere ọrụ naanị ya. Egwuregwu egwu zuru ụwa ọnụ, ọ na - anọchitekwa ụsụụ ndị egwuregwu Fans gafere afọ, agbụrụ na agbụrụ. Ọ bụ ezie na ụdị egwuregwu na-agbanyeghị aka na azụmaahịa azụmaahịa, enwere ohere dị ukwuu maka ụdị ndị na-abụghị nke egwuregwu iji nweta ndị na-ege ntị na mbụ.
Ndị na-egwu egwuregwu na-anọchi anya usoro kwụpụtara iji nweta ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu. Enwere ụzọ dịgasị iche iche iji mepụta ihe ma mepụta mmata ihe na ahịa gburugburu akara gị. Cheta iburu n’uche na ndị na-egwu egwuregwu bụ ndị ahịa ọkaibe. Ọ dị oke egwu na mgbasa ozi ndị na-egwu egwuregwu gị ga-adaba na ụlọ ọrụ yana ndị ị na-ahọrọ.
Tags: agbadadaz egwuregwudrlupoesportsnwanyi iruegwuregwu ahiaonye na-egwu egwuregwuinflugba Cha Cha influencer ahịaegwuregwu njikọtanne yainfluencerkfclglivestreamndụ egwu egwuregwuninjanordvpnreesnkwado njikọtuwichituwulu iyitwitchconyoutubeEgwuregwu YouTubendị ikwu
Polina Haryacha bụ Onye guzobere na Udochukwu, a data-chụpụrụ, nnweta-lekwasịrị anya ahịa gị n'ụlọnga na-ejikọ ụdị na yiri ka yiri egwuregwu. N'ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe na azụmaahịa ngwaahịa, nnweta onye ọrụ, na nyocha azụmaahịa, Polina bụ onye ama ama ama ama gosipụtara na TechCrunch, AdExchanger, Adweek, na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ. Ọ bụkwa onye na-ekwu okwu na mgbakọ ahịa dijitalụ kachasị elu, gụnyere Summit Digital na PubCon, ebe ọ na-ekerịta ọkachamara ya n'ịmepụta ma na-eto eto na kọmputa, PC, na egwuregwu njikwa.